Mafonisaiti: Gadzira Kutengesa Funnel Mawebhusaiti uye Mapeji Ekumhara muMaminiti Uchishandisa Runhare Rwako | Martech Zone
Izvi zvinogona kutsamwisa vamwe vanhu muindasitiri yangu, asi makambani mazhinji anongoshaya modhi inotsigira iyo investimendi mune yakakura saiti yekuendesa uye zvemukati kushambadzira zano. Ndinoziva mashoma mabhizinesi madiki achiri kuenda pasuo nesuo kana kutsamira pashoko-re-muromo kutsigira bhizinesi rinonakidza.
Phonesites: Tanga Mapeji Mumaminitsi
Bhizinesi rega rega rinofanirwa kuenzanisa nguva yemuridzi waro, simba, uye mari yekudyara kuti ibudise yakanyanya kunaka nzira yekutengesa kuunza bhizinesi idzva. Dzimwe nguva, kudyara muwebhusaiti kwakapusa sekubata dura uye nekuisa yakachena, yakapusa, inoteerera-inoteerera, uye yakagadziridzwa peji yekumhara. Ndizvo chaizvo Phonesites ndeye…
Sarudza template kana kutanga kubva pakutanga. Pre-yakagadzirwa matemplate anoisa mune 2 kudzvanya.
Tanga kuvaka mapeji nekuwedzera mameseji, mifananidzo, uye vhidhiyo ine nyore kudhonza-uye-kudonhedza mupepeti.
Brand saiti uchishandisa yako tsika domain uye batanidza chero yechitatu-bato mapuratifomu auri kushandisa.
Seta otomatiki mhinduro ne email kana SMS yekutevera.
Wedzera kusvika kwako kuburikidza nekushambadzira uye kopi inofambiswa neAI.
Mafonisaiti anosanganisa akasimba matemplate, kuunganidzwa kwedata, uye AI-inotyairwa zvemukati kubatsira mabhizinesi kana masangano kuburitsa yakakwirira-inoshandura inofambiswa nzvimbo dzekutengesa mumaminitsi.
Phonesites yakabatsira pamusoro pemabhizinesi e10,000 kugadzira anopfuura miriyoni inotungamira uye kushandura iwo mumamiriyoni emari. Mafonisaiti webhusaiti isingarwadze & yekumisikidza peji inovaka iyo ichaita kuti iwe ugadzire akawanda anotungamira, akawanda vatengi, uye kwakawanda kutengesa. Mafonisaiti anogonesa mabhizinesi madiki uye masangano:
Tanga Mapeji mumaminitsi pane chero mudziyo. Vavaki vewebhusaiti yavo vane pre-yakavakwa, yakakwirira-inoshandura matemplate aunogona kushandisa kuti yako saiti ivakwe mumaminitsi mashoma.
Unganidza Kutungamira uye kugadzwa kwebhuku. Vaka mapeji akareruka anotungamira vashanyi kuburikidza nemaitiro ako ekutengesa nhanho nhanho uchiunganidza data munzira kuti iwe ugone kutevera.
Gadzira Zvemukati - Unogona kugadzira kopi yekushambadzira yemhando yepamusoro mune mashoma mashoma nePhonesite's AI Munyori.
Email Kutevera-Ups -Hapana kudikanwa kwechirongwa cheemail, Mafonisaiti akavakirwa-mukati email system inoita kuti iwe utumire yekutevera otomatiki.
Wana Rubatsiro -Bata muChikwata cheNyanzvi kuti ubatsire ne1-on-1 mazano ekufona, live chat, nharaunda yakazvimiririra, uye vhiki nevhiki workshop.
Chero zvemukati manejimendi system (CMS) inoda kugona kwekubatanidza kuwedzera uye kuwedzera-maficha uye kushanda. Mafonisaiti haana kusiyana, ane akagadzirwa akabatanidzwa kuZapier, Mailchimp, Stripe, Twilio, Vimeo, YouTube, Google ReCaptcha, Facebook Ads, Google Analytics, Hotjar, Calendly, nezvimwe.
Tanga Yako Yemahara Phonesites Muedzo
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Phonesites uye ndiri kushandisa yangu yakabatana link mune ino chinyorwa.
Tags: calendlydhonza uye udonhedze mupepetifacebook adsnezvimirogoogle analyticsGoogle ReCaptchahotjaryekumhara peji yewebhu muvakipamapejitungamira muunganidzwamailchimpphonesitesfomu yekutengesamuvaki wekutengesa funnelnzvimbo dzekutengesa funnelmutsetseTwilioVimeoWebsite BuilderYouTubezapper